Adventure Park Hellendoorn ga-eme ememe Heksendoorn - Thrilltalk.com
Home/Halloween/Adventure Park Hellendoorn ga-eme ememe Heksendoorn
Ọ dị jụụ ogologo oge site na Overijssel, mana anyị nwere ike ikwenye ugbu a Ogige njem Hellendoorn Heksendoorn ga-eme ememme na 2020. N'ihi usoro ndị gbara gburugburu corona virus, a gaghị enwe 'mkpu' n'afọ a.
Heksendoorn ọ bụghị naanị maka ụmụaka
Ikpeazụ mbipụta nke Screams bụ nnọọ ewu ewu. Ogige ahụ natara ọtụtụ otuto site n'aka ndị ọbịa na ndị mgbasa ozi maka usoro ndị ogige ahụ merela n'oge dị mkpirikpi. A họpụtara ogige ahụ n'oge izizi Dutch nke 'Onyinye Egwu'. Na Onyinye Egwu bụ ụzọ nke Dennis van Breukelen iji nye ụlọ ọrụ ụjọ na Dutch ụjọ. Ogige ntụrụndụ na-ewu ewu na mmemme ahụ. A họpụtara ha maka edemede: Kachasị mma Evabanye, Best Maze (Horror Hotel), Best Scare Actors.
Ihe 'Onyinye Egwu'A ga-enye onyinye na September 12.
Afọ a ogige ga Heksendoorn mana na ubochi puru iche nkpatu ga-adi. Enwere ụlọ ebighebi abụọ na-emeghe mana enweghị mpaghara egwu. Nke a bụ igbochi nnukwu ndị ọbịa ịbịakọta. A ga-enwe ndị na-eme ihe nkiri na-ejegharị na ogige ahụ iji menye ndị ọbịa ahụ ụjọ.
Ogige njem Hellendoorn emebeghi eze ihe obula. Ogige nwere ike ime nke a n'oge na-adịghị anya.
Parkgbọ njem Park Hellendoorn Heksendoorn Overijssel park Onyinye Egwu mpaghara ụjọ Mkpu
Efteling ga-emeghe Max & Moritz na June 20